Car Crankshaft, Fgbọ ala Flywheel, Car Camshaft - SAMUEL
Cgbọ ala crankshaft
Flygbọ ala ụgbọ elu
Automotive sịlịnda isi
Cgbọ ala crankshaft ọzọ >>
Okwesiri maka ugbo ala, ugbo mmiri, ugbo ala nke injinia, akuku ugbo, ihe ntinye nke mbu, nke di nma, nke di nma, nke di elu, nke di nfe, ncha ocha na adi nma mgbe emechara ya. Ngwaahịa ọ bụla agbanweela ule siri ike ma mee ka nkwa ya sie ike. Igbe nkwakọ ngwaahịa nwere ọdịdị dị mma na nrụpụta na-adịgide adịgide: 20-30 na-arụ ọrụ ụbọchị, nkwakọ ngwaahịa na-anọpụ iche / nkwakọ ngwaahịa mbụ, ọnọdụ njem: ala, oké osimiri na ikuku.
Camgbọ ala camshaft ọzọ >>
Okwesiri maka ugbo ala, ugbo mmiri, ugbo ala nke injinia, igwe oru ugbo, akuko nke mbu, nke di nma nke oma, njuputa di elu, ire oma, ncha ocha na ogologo oge mgbe emechara ya. Ngwaahịa ọ bụla agbanweela ule siri ike ma mee ka nkwa ya sie ike. Igbe nkwakọ ngwaahịa nwere ọdịdị dị mma na nrụpụta na-adịgide adịgide: 20-30 na-arụ ọrụ ụbọchị, nkwakọ ngwaahịa na-anọpụ iche / nkwakọ ngwaahịa mbụ, ọnọdụ njem: ala, oké osimiri na ikuku.
Flygbọ ala ụgbọ elu ọzọ >>
Automotive sịlịnda isi ọzọ >>
High nkenke crankshaft adabara RenaultR4
Elu-edu ụgbọ ala crankshaft adabara Ren ...
Akwa-ụgbọ ala Flywheel
A zuru ezu nso nke akpakanamde crankshafts Cran ...
Elu-mma sịlịnda isi
Shijiazhuang Samuel Auto Parts Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke akpaaka akụkụ. Na afọ nke mmepụta na ime ihe, ọ kpụrụ a mmepụta na nhazi akara na ikenyeneke mbiet technology, elu mmepụta akụrụngwa, mbụ na klas ule ụzọ na nlezianya àgwà management. ISO9001 2000 mba quality usoro asambodo, àgwà esịmde oru ụkpụrụ nke esịtidem combustion engine crankshaft JB / T6727-1999, JB / T51049-1999.
E zigara Renault Peugeot crankshaft n'Ijipt
Emeputa maka China High Quality Custom Alloy Steel Engine Crank Transmission Spline Shaft Custom Mere
South nke Zongshizhuang Village, Zongshizhuang Town, Jinzhou City, Shijiazhuang City, Province Hebei